ड्रिप मार्केटिंग भाग १: को ख्याल छ?
बुधवार, अगस्त 18, 2010 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
हो, म ड्रप मार्केटिंगमा पोष्टहरूको श्रृंखलामा भविष्यका किस्ताहरू लेख्ने योजना गर्दछु। तर, यदि म हैन भने पनि के हुन्छ अनुमान गर्नुहोस्: शीर्षक अझै पनी काम गर्दछ। एक ड्रिप मार्केटिंग अभियान को पहिलो भाग के लिने निर्णय गरीरहेको छैन। यो एक डोमेन नाम लिने वा लैंडिंग पृष्ठ डिजाईन गर्ने होइन। यसले तपाइँको सम्पर्क फारमहरू सेट अप गरिरहेको छैन र अभियानलाई स्वचालित गर्दैछ। कुनै पनि ड्रिप अभियानको भाग १ पत्ता लगाउँदैछ कि वास्तवमा कसले तपाईंलाई भनेको कुराको ख्याल राख्छ।
को ख्याल राख्छ भनेर निर्धारण अधिक उपयुक्त तरीकाले बयान गर्न सकिन्छ: तपाईं कसलाई हेरचाह गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं यसलाई विज्ञापनमा, नेटवर्कि everywhereमा, र व्यापार कोचहरूबाट जताततै सुन्नुहुन्छ - आफ्नो कोठा पत्ता लगाउनुहोस्। ड्रिप मार्केटिंगमा यो असाधारण रूपमा महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईं ड्रिप गर्नु अघि तपाईं सिसा चाहिन्छ; र त्यो नेतृत्व प्राप्त गर्न तपाईंलाई मूल्यको केहि प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ; र कसरी थाहा छ कि मूल्य को हो के थाहा जब सम्म तपाइँ थाहा छैन कि कस को खरीद छ?
यो सहि छ, "खरीद गर्दै।" यसको सामना गर्नुहोस्, यद्यपि तपाईंले उनीहरूलाई तिनीहरूको जेब बुक खोल्न आग्रह गरिरहनुभएको छैन, तपाईं व्यक्तिहरूलाई आफैंबाट केही किन्न भन्दै हुनुहुन्छ - सम्भवतः केही सामग्री तपाईंले उनीहरूको फाइदाको लागि विकास गर्नुभयो। अब, तिनीहरू पैसाले किन्दैनन्। सचेत बजारबाट ज्ञान खरीद गर्ने मुद्रा डलर र सेन्ट होईन। मुद्रा सम्पर्क जानकारी हो ... र मुद्रास्फीति दर आकाश उच्च छ।
एक सोडा को एक निकल को लागी गर्न को लागी प्रयोग, सही? यो सत्य हो, र एक मान्य ईमेल ठेगाना एक अतिथि पुस्तक प्रविष्टि (ती सम्झना) को लागी जानका लागि प्रयोग। आब नाई। वेब ब्राउज गर्ने प्रत्येक सम्भावितले तिनीहरूको डाटाबाट भरिएको पकेट बुक बोक्दछ – ईमेल ठेगाना, फोन नम्बर, र जनसांख्यिकी पनि। बदलामा कुनै मूल्यको केही प्रस्ताव नगरीकन त्यो सम्पर्क डेटाको लागि सोध्नेहरू भनेको इन्टरनेट मार्केटिंगको प्याराजस्तै हुन्, दानका अनुग्रहमा शुद्ध मुद्राको लागि भिख माग्न। भीख माग्नुको सट्टा निष्पक्ष सम्झौता गर्नुहोस्। मानको केहि चीज प्रस्ताव गर्नुहोस् सम्मानित लेखकहरूबाट नि: शुल्क सुझावहरूएक नि: शुल्क ह्वाइटपेपर कागजात, एक नि: शुल्क सेमिनार वा घटना, वा मेरो व्यक्तिगत मनपर्ने, एक e-कोर्स। र, अधिक तपाईं चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ (उदाहरणका लागि अधिक विस्तृत डाटा तपाईं लेड प्रदान गर्न सोध्नुहुन्छ) अधिक मूल्य तपाईंले सिर्जना गर्नु पर्छ। अन्यथा, तपाई आफैंलाई धेरै लिने बिना bill १० बिलको लागि सोडा बेच्न पाउनुहुनेछ।
अब, यो "को" यस को भाग हो जसले ख्याल राख्दछ कि वास्तवमा महत्व पुर्‍याउँछ। तपाईले देख्नुहुन्छ, तपाईले प्रदान गरिरहनु भएकोमा मान तपाईलाई प्रस्तुत गर्ने जो सिधै सम्बन्धित छ। यदि तपाईंलाई तपाईंको दर्शक को हो भनेर थाहा छ भने, तब (र त्यसपछि मात्र) तपाईं उत्पादन उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ जुन उनीहरू आफ्नो सम्पर्क जानकारीको मूल्यमा खरीद गर्न इच्छुक हुनेछन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, तपाईंले सम्पर्क डाटाको लागि बेच्ने योजना बनाउनु भएको उत्पादनको बढि समय खर्च गर्नुपर्नेछ, जुन तपाईंले पैसाको लागि बेच्ने योजना बनाउनुभएको छ। सबै भन्दा पहिले, पछिल्लो पछिका लागि थोरै आशा छ।
त्यसोभए, यदि तपाईं ड्रिप अभियान सुरु गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, आफैलाई सोध्नुहोस् "कसले परवाह गर्छ?" पोलिश अप अफरको कि तपाईले मागेको कुरा माग्दै हुनुहुन्छ - एक मार्केटिंग pauper नहुनुहोस्। र, एक पटक तिनीहरूले खरीद गरेपछि, डेलिभर गर्न नबिर्सनुहोस्।
टैग: ड्रिप मार्केटिंग
सामाजिक सबै कुरा को विरोधी? साँच्चै?
सामाजिक मिडिया डिटेक्टरहरू को साथ व्यवहार
अगस्ट 19, 2010 मा 11: 20 AM
मलाई लाग्छ हामी सोच्छौं ... राम्रोसँग मलाई ख्याल छ ताकि तिनीहरूले पनि गर्नेछन् ... तपाईको श्रोतालाई चिन्नु र कसलाई परवाह गर्छ भनेर जान्न यो महत्त्वपूर्ण छ। राम्रो पोस्ट।